Amasu okuhweba nge intraday adlula kakhulu
V2 izinhlelo zokuhweba eziphakeme - Zokuhweba eziphakeme
Ngokufundwa kanye nokufundiswa kwesiZulu, ukuhlola izinhlelo zokufundiswa kwesiZulu eNyuvesi YaKwaZulu- Natali kanye nokuhlola imivuzo yezemfundo. Lapha eNingizimu.
Izinhlelo zokuhlela ulimi futhi ngeke lezo zinhlelo kuthiwe seziphothuliwe ibe ingakaxazululeki leyo nkinga ebikade ihlonziwe. Izethembiso Ezinhle zeNcwadi kaMomoni E minyakeni eminingi eyadlulayo ngema eduzane komhlaba kababa osemncane njengoba enga- kwazi ukukhetha phakathi kwempilo kanye nokufa.
IsiZulu Ulimi Lokuqala Lokwengeza/ P1 DoE/ Iphepha Eliyisibonelo ( Exemplar) NSC Akuvunyelwe ukukopisha leli phepha Phenya ikhasi 7 Umuzi eqinisweni ufana nezingane zakho ozizalayo. Akukhathalekile ukuthi umuzi ngaphakathi unempahla enhle, kodwa uma ingaphandle lawo linganakekelwa akukuhle
Unkosikazi wakhe owayecasukile kanye naba- ntwana ababili bema eduzane. V2 izinhlelo zokuhweba eziphakeme.
Yezikhungo eziphakeme. Nayo inqubomgomo yolimi.
Bese kuthi umkhandlu wesikhungo ngasinye semfundo ephakeme unqume inqubomgomo yolimi yesikhungo bese iyashicilelwa. The love of knowing what is going on around made Hleziphi Sibanyoni to be where she is today.
Landa izinhlelo zokusebenza ezithandwayo kakhulu kumadivayisi we- Android, izinhlelo zokusebenza zamahhala nezifakiwe ze- Android. IZINHLOBO ZAMAREKHODI AZITHOLAKALELA NGOKWAWO ( Lez i yizinhlobo zamarekhodi njengob a zishi cilelwe kwiGazethi yangom hla zingam a- 25 Febr uwari 200 5,.
Wonke amalungelo agciniwe. Following her heart in news and promoting isiNdebele, Hleziphi joined the community radio station – Kangala Community Radio Station ( KCRS) in April as news anchor and also doing other programmes.